2019 #NABShow: Product Spotlight - Blackmagic ဒီဇိုင်းမှ HyperDeck Extreme 8K HDR | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » 2019 #NABShow: ကုန်ပစ္စည်း Spotlight ကို: HyperDeck လွန်ကဲ 8K HDR Blackmagic ဒီဇိုင်းအားဖြင့်
အသစ် HyperDeck လွန်ကဲ 8K HDR ထံမှ Blackmagic ဒီဇိုင်း လာမယ့်မျိုးဆက်ထုတ်လွှင့်, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ် application များအတွက်ပြီးပြည့်စုံမျိုးစုံဖြေရှင်းချက်ဖြစ်လာဟုသတ်မှတ်ထားသည်။ ဘက်စုံများအတွက်ဒီဇိုင်း, အ HyperDeck လွန်ကဲ 8K HDR တစ်ကလစ်ကစားသမားက ISO cam အသံဖမ်းနှင့် / သို့မဟုတ်မာစတာစံချိန်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဒါ့အပြင်အဆိုပါ Analog စသွင်းအားစုတည်းဖြတ်ရေးသို့မဟုတ် streaming ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်အတွက်မျိုချမိပါစေခြင်းငှါဟောင်းကိုဗီဒီယိုတိပ်ခွေအဘို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ 10G Ethernet, အ HyperDeck လွန်ကဲ 8K HDR နှင့်အတူဒီဇိုင်းမြန်ဆန်မီဒီယာအပ်လုဒ်များအတွက်မြန်နှုန်းတိုးပွားစေပါသည်။ လယ်အသံဖမ်းအဖြစ်အသုံးပြုသောအခါ, ယူနစ်ပါဝင်သည် HDMIbuilt-in နယ်ပယ် 3D LUTs အတူ SDI နဲ့ Analog သွင်းအားစု!
အဆိုပါ HyperDeck လွန်ကဲထိန်းချုပ်ရေးကြီးလွန်းဖုနှင့်အတူအသုံးပြုသူများသည်အစဉ်အလာထုတ်လွှင့်ကုန်းပတ်ထိန်းချုပ်မှုဆောင်တတ်၏, နှစ်ခုမီဒီယာ slot နှစ်ခု, 12K အဘို့ကို Quad 8G-SDI, archive ကို Analog စဆက်သွယ်မှု, ကို USB-C အပြင်ပ disk ကိုမှတ်တမ်းတင် featuring, ရှေ့ panel ကစပီကာနှင့်နားကြပ် input ကိုပိုပြီးရိုးရာထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူအသုံးပြုသူများကိုပေးပါသည်။ ဒါ့အပြင်အဆိုပါယူနစ်နှစ်မျိုးလုံး AC အများနှင့် DC ကပါဝါဆက်သွယ်မှုရှိပါတယ်စတူဒီယိုအတွက်သို့မဟုတ်တည်နေရာပေါ်ဘို့ဒီဇိုင်းလုပ်ခဲ့တာပါ။ အဆိုပါသည် RS-422 ထိန်းချုပ်ရေးအင်္ဂါရပ် နိုင် အလုပ်မော်ကွန်းနှင့်ပုံစံများအကြားပြောင်းလဲဘို့စုံလင်သောအရာဒစ်ဂျစ်တယ် BetaCam, 1 လက်မကို C format နှင့် BetaCam SP အပါအဝင်ကုန်းပတ်၏ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေး, ထိန်းချုပ်ထားသည်။
အဆိုပါယူနစ်ကိုလည်းမဟုတ်တဲ့ရပ်နားမှတ်တမ်းတင်ဘို့ကို dual CFast မီဒီယာထောက်ခံမှုကတ်များပါရှိပါတယ်။ အဆိုပါ H.265 ဖိုင်တွေဒါမှတ်တမ်းတင်, အသေးစားများမှာ စံ CFast ကဒ်ပေါ်မှာနာရီအလွန်ဖြစ်နိုင်သောပါ! H.265 နှင့်အတူ, သငျသညျ, တစ်ဦး 498 တီဘီကဒ်အပေါ် 8Kp60 မှာ 1p1,059 အတွက် 2160 မိနစ် 60 မိနစ်မှတ်တမ်းတင်နိုင်ပါတယ် က Ultra HD တစ်ဦး 2,354 တီဘီကဒ်အပေါ် 1080p59.94 နှင့် 1 မိနစ်။ ဒါက 8K အတွက် 8 နာရီကျော်ဖွင့်ခြင်းနှင့် 39 ကျော်နာရီအတွင်း HD! အဆိုပါ HyperDeck လွန်ကဲ 8K စံချိန် cache ကိုအဖြစ်အသုံးပြုခံရဖို့တစ် PCIe flash ကို disk ကိုရှိပါတယ်ဘောင်ကျဆင်းသွားဖယ်ရှားပစ်ရန်, cache ကိုအလိုအလြောကျကျော် ယူ. မီဒီယာကိုဖမ်းယူနိုင်ဘူးဆို content တွေကိုမှတ်တမ်းတင်လိမ့်မယ်။ အဆိုပါ HDR ပုံစံများဖြင့်အလုပ်လုပ်သည့်အခါပင် HDR မျက်နှာစာများပြောင်းလဲမျက်နှာစာများ built-in! files မှန်ကန်သော HDR သတင်းအချက်အလက်ထို့နောက် SDI နှင့်အတူ tagged ကြသည်နှင့် HDMI သွင်းအားစုကိုလည်းအလိုအလြောကျ HDR ဗီဒီယိုကိုစံချိန်စံညွှန်းများ detect ပါလိမ့်မယ်။ static metadata ကို PQ နှင့် HLG ကို formats ကတော့ ST2084 စံနှင့်အညီကိုင်တွယ်လျက်ရှိသည်။ ထွန်းတောက် LCD ကိုဒါနှစ်ဦးစလုံးဖမ်းယူရေးကိုကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်မယ့်ကျယ်ပြန့်အရောင်အစအဆုံးအကုန်ရှိပါတယ်။ 2020 နှင့်ဖမ်းယူရေး။ 709 colorspaces ။ အဆိုပါ HyperDeck လွန်ကဲ 8K HDR LCD ကိုအရောင်အစအဆုံးအကုန် built-in ပင် DCI-P100 ပုံစံ၏ 3% ကိုကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်။
ထိုသွားရောက်ကြည့်ရှု Blackmagic ဒီဇိုင်း အဆိုပါ 2019 မှာ #NABShow တဲ #SL216 ဆန္ဒပြပွဲများနှင့် application များအတွက်။
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ NAB Show ကို Las Vegas မှ Show ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း NAB NAB16 nabshow လူငယ်ကဏ္ဍ Show ကိုအမျိုးသားအစည်းအရုံး 2019-04-08
ယခင်: Epic Games ၏ Unreal Engine ကိုနည်းပညာပိုင်းသူဟာ Emmy ဆွတ်ခူးနှင့် NAB 50 မှာ 2019 အသံလွှင့် Partner သန်းပိုမိုတင်ဆက်အတွက် Featured သည်
နောက်တစ်ခု: အဆိုပါ Frame.io ရေးသားသူပလက်ဖောင်းနှင့် Zapier ပေါင်းစည်းရေးမိတ်ဆက်ခြင်း